Ukungezwani komzimba nezilwane - GAAPP
Ikhaya>Izinhlobo zokwaliwa komzimba>Ukungezwani komzimba nezilwane
Ukungezwani komzimba nezilwaneIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-05-27T10:58:29+02:00
Kuyini ukungezwani kwesilwane?
Abantu abanezinkinga zokungezwani komzimba nesilwane banamasosha omzimba azwela ngokweqile. Bangasabela kumaprotheni angenabungozi kudander wesilwane, ama-flakes esikhumba, amathe nomchamo. Lokhu kungadala ukusabela okweqile noma kukhulise izimpawu ze-asthma kwabanye abantu. Ungathola ukungezwani kwesilwane nomaphi ekhaya. Ama-allergen wezilwane asemakhaya nakwezinye izindawo ezingakaze zifake izilwane ezifuywayo. Lokhu kungenxa yokuthi abantu bangakwazi ukuthwala izifo zesilwane ezingubeni zabo. Ama-allergen ngeke aphelelwe amandla isikhathi eside. Amagciwane anamathela ezindongeni, ifenisha, okokugqoka nakwezinye izindawo. Ama-allergen angahlala emazingeni aphezulu izinyanga ezimbalwa. Izinwele zezilwane akuyona i-allergen. Ingakwazi ukuqoqa udander, umchamo namathe. Futhi ingaphatha ezinye izifo ezifana nothuli nempova.
Izimpawu zokungezwani komzimba nesilwane
Izimpawu zokungezwani komzimba wesilwane zivela ngesikhathi noma ngemuva nje kokuchayeka esilwaneni. Izimpawu zingahlala isikhathi eside ngemuva kokuba isilwane sesihambile, ngoba idander ihlala emoyeni, kwifenisha noma ezingutsheni.
Ukulunywa, amehlo anamanzi
Ukukhwehlela, ukuqina kwesifuba, ukuphefumula okuncane nokuphefumula
Ukuthintana nesilwane sasekhaya nakho kungadala izimpawu zokungezwani komzimba nesikhumba (isikhumba esilumayo noma esikhuphukile, amabala abomvu). Izilwane ezifuywayo nazo zingadala izimpawu ze-asthma, zibangele ukushaywa umoya, ukuphefumula kanzima noma ukuqina kwesifuba.
Ukuhlolwa kokungezwani komzimba kuzobonisa uma kukhona ukuzwela komzimba esilwaneni. Udokotela wakho angasebenzisa noma ukuhlolwa kwegazi noma ukuhlolwa kwesikhumba ukusiza ukuxilongwa. Umlando wezokwelapha, izimpawu, ukuhlolwa komzimba kanye nemiphumela yokuhlolwa kuzosiza udokotela wakho ukuthola ukuxilongwa okulungile.
Uma usola ukuthi awuhambisani namakati, bheka i-allergen ukuze uthole ukuxilongwa okufanele nokwelashwa okufanele.
Ukugwema kuyindlela engcono kakhulu yokuphatha ukungezwani kwekati. Gwema ukuxhumana namakati noma izinja noma izindawo lapho zihlala khona. Gcina izilwane ezifuywayo ngaphandle kwekhaya lakho. Uma unekati futhi uxabana namakati, cabanga ukususa ikati ekhaya. Uma kungenzeka, zama ukugwema ukuvakashela amakhaya nezilwane ezifuyiwe ongazwani nazo.
Izimpawu ze-Nasal zivame ukuphathwa ngama-sprays we-corticosteroid nasal noma ama-antihistamine omlomo. Izimpawu zamehlo zingelashwa ngamaconsi wamehlo. Izimpawu ze-asthma zingelashwa ngama-corticosteroids aphefumulelwe kanye / noma ama-bronchodilators ukuvimbela noma ukuqeda izimpawu zokuphefumula. I-Immunotherapy ingaba yindlela yokwelashwa ephumelelayo, eyakha ukubekezelelana uma ilwa nezinto ezihlasela isilwane.
Uma umndeni wakho ufuna ikati yize umuntu othile ekhaya egula, cabanga ngezinye izinketho. Khetha izilwane ezifuywayo ezingenaboya noma izimpaphe. Izinhlanzi, izinyoka noma izimfudu ezinye zezinketho.
Uma unekati kodwa ungafuni ukulithola ikhaya elisha, nazi izeluleko namasu angasiza:
Zama ukungazigangi nokuziqabula izilwane ezifuywayo uma ungezwani nazo.
Gcina isilwane ngaphandle kwegumbi lakho lokulala bese usikhawulela emakamelweni ambalwa kuphela, kepha qaphela ukuthi lokhu ngeke kukhawulele izixwayiso zalelo gumbi.
Yiba nomuntu ongenakho ukungezwani nomzimba ukuxubha isilwane njalo. Ngaphandle, hhayi endlini.
Ukusetshenziswa kokuhlanza okuphezulu okusebenza kahle okunesikhwama sesihlungi esiphindwe kabili noma esincane ukunciphisa inani le-allergen yezilwane ekhona ekuphepheni okuvuza kubuyele emoyeni wegumbi.
Susa i-carpeting kanye nama-rugs, angabamba i-pet dander nezinye izifo.
Zama ukugeza ikati lakho njalo kanye ngesonto. Inganciphisa i-allergen yekati yomoya, kepha kuwumsebenzi onzima kakhulu kubo bobabili - wena nekati.
Ukungezwani komzimba nesilwane kungaba inkinga emphakathini okwenza kube nzima ukuvakashela abangane nezihlobo ezinamakati nezinja noma amahhashi nezinye izilwane. Lokhu kungaba yinkinga ikakhulukazi ezinganeni ezingakwazi ukubamba iqhaza emisebenzini eyenzelwa ekhaya labangane. I-allergen yakho ingakusiza ukunquma ukuthi ikuphi ukwelashwa okungcono ukwelapha ukungezwani kwakho nesilwane sakho futhi unikeze iseluleko mayelana nokusetshenziswa kwemithi ngaphambi kokuchayeka komphakathi kanye nezinyathelo ezithile ongazithatha ngemuva kokuvezwa.